Miyeeysan aheyn in wax la iska weydiiyo inta jeer ee Wasiir C/raxmaan yariisow ku dhacay gefaf been abuurasho ah.? | YoobsanNews.com
Miyeeysan aheyn in wax la iska weydiiyo inta jeer ee Wasiir C/raxmaan yariisow ku dhacay gefaf been abuurasho ah.?
Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan [Yariisoow] ayaa ku dhacay dhowr jeer qaladaad ay mamnuuc tahay inuu ka yimaado shaqsi xilkiisa oo kale haya, tiiyoo mar walba oo qaladaadkaasi ay dhacaan aan waxba la iska weydiin, horayna lagaga socdo.
Qofku, mar qalad wuu ku dhici karaa, inkastoo marka aad xil mugiisu intaas la’eg yahay aad hayso ay waajib kugu tahay in wax walba oo aad baahineyso aad si hufan u hubiso, balse marka qaladaadku ay joogto noqdaan waxaa muddo in la is weydiiyo sababta iyo danta laga leeyahay.
Malaheyga, sababta gefafkaasi ay u soo laabanayaan waxaan ictiqaadsanahay in ay tahay isaga oo aaminsan in aysan jirin cid wax u soo raacaneysa, haddii dalka ay ka jiri lahaayeen warbaahin xor iyo xalaal ah inta miiska la soo fadhiisiyo ayaa la dhihi lahaa hadalkaas iyo hadalkaas ayaad tiri shalay haddana maanta midkan ayaad sheegtay maxaad ula jeedaa.? Guri ba’ow yaa ku leh.?
Gefafkii muuqday ee uu ku dhacay waxaa ka mid ahaa:
Maalintii la magaacabay, maalintii ku xigtay wuxuu shaqo ka fadhiisin ku sameeyey Agaasimihii wasaaradda warfaafinta C/risaaq Yuusuf [Bahlaawi] oo uu yiri; waxaa lagu soo eedeeyey musuqmaasuq.
Ma jirtaa cid daba gashay kiiskaas oo ii sheegi karta halkii uu ku dambeeyey.? Muwaadinka la soo eedeeyeey wuxuu xaq u lahaa in cadaaladda la hor geeyo, laguna caddeeyo dambigii uu geystay, ciqaabteedana la marsiiyo, ama in la shaaciyo ujeeddada ka dambeysay in qof shaqadiisa wata iyada oo shaar dowladeed la wato lagu dhibaateeyo. Xusuuso qof walba oo dulmi geysta, maalintiiseey sugeysaa, magacyadda ALLE waxaa ka mid ah inuu yahay CAADIL. [AL-CADLU].
Falkii wuxuushnimada ahaa ee ka dhacay Bariire oo ka tirsan Sh/hoose, ee lagu laayey dadkii shacabka ahaa Wasiir C/raxmaan yariisow wuxuu yiri Bariire waxaa lagu laayey Shabaab, isla markii waxaa beeniyey Taliyihii ciidamada milateriga Soomaaliya oo sheegay in dadkii lagu xasuuqay duqeymahaasi ay ahaayeen rayid. Sow ma habbooneyn wasiirka in la yiraa waa inaad raaligelin siisaa ehelada dadkii geeriyooday oo aad qalbiyadooda dhaawacday.
C/kariin Qalbi dhagax argagixiso ayuu ku sheegay Baarlamaanka Soomaaliya ayaanna beeniyey, oo yiri ONLF argagixiso uma naqaan.
Wuxuu bartiisa [Face book] soo dhigay 2 nin oo uu ku daray dadkii lugta ku lahaa qarixii Zoobe. Dowladdu markii ay dib u baartay kiiska waxeey ogaatay raggaasi in ay berri ka ahaayeen.
Haddaba maxaa loo waayey hay’ad warbaahineed oo wasiirka wax ka weydiisa dhammaan dhacdooyinkaas laga soo xigtay, oo isla Dowladdii uu ka tirsanaa hay’ado ama shaqsiyaad ka tirsan ay ku beeniyeen.
Waxeey isweydiintu tahay ninkan xogta uu dadka ku masabidanaayo intuu ka keenaa.?
Kafia Mohammed Elmi
Previous: Jilayaal Hindi Ah Oo La Amray In Madaxa Laga Wada Jaro
Next: Jaaliyadda Soomaalida Zwolle & nawaaxigeeda oo dooratay Guddi cusub [SAWIRRO]